Kriti Sanon amaan lixaad leh kala dul dhacday Ranbir Kapoor waxayna ku tilmaantay Madhuri Dixit oo ragg ah dhanka kartida filim sameynta iyo sida dareenada kala duwan shaashada loogu muujin karo waxayna jeclaan laheyn Kriti inay mar un RK la shaqeyso.
Atooraha bartamihii 2000-maadkii Bollywood-ka kusoo biiray Shinay Ahuja sidoo kalena markii dambe noloshiisa muran ku aadan inuu kufsi u geestay gabbar shaqaalo u ahayd ayaa la sheegay in haatan noloshiisa filim laga sameenayo.
Akshay Kumar ayaa sheegay in wiilkiisa Aarav Kumar uu sabab u ahaa inuu ku biiri Digital World ama uu sameeyo filimada sida Online-ka ah Internet-ka looga daawado asigoo Kumar soo wado filim taxane ah oo lagu magacaabo The End.
Jhanvi Kapoor oo sanadkii hore Bollywood-ka kusoo biirtay kuna soo caan baxday filimkii HIT-ka noqday Dhadak aya ka dhawaajisay inaysan caanimo u baahneyn oo ay u baahan tahay sameynta filimo tayo wanaagsan madaama maalinkii ay dhalatay ilaa haatan ay caan tahay qof walbana yaqaano waayo Sridevi ayaa dhashay oo sanadkii hore geeriyootay halka filim soo saaraha caanka ah Boney Kapoor isagana aabo u yahay una dheer tahay in Anil Kapoor adeer u yahay.
Prineeti Chopra ayaa wax kama jiraan ku tilmaantay inay dhawaan guursaneyso waxayna hadalkan ka dhawaajisay xili ay xayeysiin u sameeneyso filimkeeda Kesari oo ay Akshay Kumar la jileyso lana daawan doono Khamiistan.
Karan Johar ayaa hooyadiis Hiroo Johar u dhigay xaflad dhalasho oo aan dad badan kasoo qayb galin madaama hooyadiis ka helen xafladaha dadka caanka ah isugu imaadaan.
Sonu Sood ayaa tuulooyin kala duwan oo gudaha Hindiya ku yaalo oo aan hormarsaneyn dadka ku nool u qeybiyay baaskiil si ay caafimaad jir ahaan kaga helaan adeegsigiisa iyo sidoo kale gaadiid inay ka dhigtaan.
Ajay Devgn ayaa sameyn doono filim doorka hogaamiyihii Squadron ee lagu magacaabo Vijay Karnik wuxuun ahaa abaan duuliyihii ciidamada cirka Hindiya ee 1971 Pakistan dagaal culus la galeen.
Waxaa Aqrisay 519